Ku soo dhawoow Si Simatech
Pathfinder ayaa Of Silk-technoloy
Simatech Inc. waa shirkad bayoteknoolajiyadda diiradda on saarka ee si dabiici ah soo jeeda, biomaterials fibroin Xariir baaba'aysa iyo horumarinta tabaha gobolka-of-the-art kala duwan ee codsiyada Biomedical. Waxaan la faaidaysta ee beeraha ee qalabka caafimaadka iyo bixinta daroogada gacanta isticmaalaya fibroin Xariir qalab Xusayn aasaasiga ah. Iyada oo farsamooyinka muhiimka ah iyo taxanaha ah waxyaabaha lahaansho la horumariyo, Simatech ka dhigi doonaa qayb qaateen in ay ka gudbaan cudurada iyo in la wanaajiyo tayada nolosha. In Simatech, waxaan isku daynaa in aan taageero hawlaha cilmi-baarista iyo horumarka by siinta alaabta fibroin Xariir caadiga ah iyo habka. Waxa kale oo aanu soo dhawaynaynaa-hawlgalayaasha iman kara adduunka oo dhan si ay u sahamiyaan beeraha cusub ee codsiga iyo horumarinta waxyaabaha cusub nala.
B qalabka asic
The alaabta fibroin Xariir bixiyo waxaa si toos ah loo isticmaali karaa by macaamiisha sida qalabka aasaasiga ah ceeriin in ay sii abuurta qalabka kala duwan fibroin Xariir.
E shuruudaha ssential
wax soo saarka oo baaxad weyn leh goobaha sare iyo habka caadiga ah; Well-aasaasay nidaamka ilaalinta tayada.
S il heesanaa
Silk, wax dhar caanka ah ee Shiinaha, si fudud oo ku filan heli karaa sida labada cocoons cayriin ama fiiloyin baaraandegi gobollada koonfureed ee River Yangtze ah, oo loo yaqaan "hooyo Xariir" in ka badan 3,000 oo sano.
T echnology iyo patent
waxyaabaha ku qoran waxay ku salaysan yihiin farsamooyinka ugu muhiimsan xuquuqda hantida aqooneed ee kaliya ee ay leeyihiin Simatech Inc.